ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသုံးချ တွင် ထိန်းချုပ်မှုlတွင်g အမျိုးမျိုးသော အဆို့ရှင် နှင့် အခြား တူသော ထုတ်ကုန်, တွင်clude လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, ဂိတ် အဆို့ရှင်, ထိန်းချုပ်မှု အခင်အရှင် နှင့် etc.With ထ သို့ 51 termတွင်တစ်ဦးls, ဖွ တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်ခွင့် မပါဘဲ အဆိုပါ အထူး wirတွင်g ကြေးနီ rတွင်gs. အဆင်ပြေ နှင့် ပိုလွယ်လိုက်တာ သို့r ထိုနေရာမှာပဲ တွင်stတစ်ဦးllတစ်ဦးtion.AOX-M စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ရှိ ဖူး mတစ်ဦးsterတွင်g အဆိုပါ နည်းပညာ ၏ အခင်အရှင် တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion တွင်dustry ဘို့ ဆယ်စုနှစ်များ။ Choosတွင်g AOX ဖြစ် တစ်ဦး pr၏essionတစ်ဦးl ရှေးခယျြမှု။ ကျွန်တော်တို့ ရှိ first-clတစ်ဦးss ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာ နှင့် pr၏essionတစ်ဦးl R & D teတစ်ဦးm သို့ ပေး သငျသညျ နှင့် တစ်ဦးppropriတစ်ဦးte ဒီဇိုင်း။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုထက် ကျော်လွန်. ESD
1. Precise အဆို့ရှင်အနေအထားတိုင်းတာခြင်း
AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုပေါင်းစုံရိုးရာ potentiometer ဖျက်သိမ်းရေး, သံလိုက်သော induction အကြွင်းမဲ့အာဏာအန်ကုဒ်သုံးပြီးလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်, တိုးတက်လာသောတည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အခါ actuator ပါဝါပြတ်တောက်ဘက်ထရီတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဆို့ရှင်အနေအထားရှိနိုင်ပါသည်မလိုအပ်ပါဘူး။
2. အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အနေအထား display ကိုရှင်းလင်းစွာအဆို့ရှင်နှင့် actuator ရဲ့ status ကိုဖော်ပြသည်။
output ကို torque ၏ 3. Wide အကွာအဝေး။
တိုက်ရိုက် torque လက်ငင်းစီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုပေါင်းစုံနေတဲ့တီကောင်ဂီယာအုံနဲ့ပေါင်းစပ်လျှပ်စစ် actuator turn 40 nm ကနေ 1000Nm.When AOX-M အထိ, အများဆုံး torque output ကို 50,000Nm မှတက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု system.We ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမတော်တဆမှု၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီးသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ Outsourcing ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိခိုက်စေ, စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့ equipment.It အဆိုပါထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုဖို့လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအသင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသိရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်ရေး၏အရည်အသွေးပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးပါ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။
ဖြေကျနော်တို့ Manufactory ပေါင်းစုံ Ruian, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်, အနှစ် 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuator turn ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အထူးပြုဖြစ်ကြသည်။
မေး: နိုင်ငံများတွင်သင့်ရဲ့ AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုပေါင်းစုံရောင်းချလျှပ်စစ် actuator လှည့်နေသော?
မေး: ဘယ် port ကိုသင်တင်ပို့နေကြသနည်း
ဖြေအများအားဖြင့်ကျနော်တို့ရှန်ဟိုင်းနှင့် Ningbo ဆိပ်ကမ်းမှတင်ပို့မည်။
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်